लडाकुदेखि मन्त्रीसम्मको अनुभव,दृढ इच्छा शक्ति र निरन्तरको संघर्षले नै मानिसलाई सफल बनाउँछ : कमला रोका - Ankuran Khabar
Sat, Nov 28, 2020 / २०७७ मंसिर १४, आईतवार
उद्योग वाणिज्य महासंघको मतगणना जारी... २०७७ मंसिर १३
नेकपा सचिवालय बैठक : ओली र प्रचण्डबीच तिक्तता अझ बढे संभावना... २०७७ मंसिर १३
जन्ती बोकेको जीप दुर्घटना, चार जनाको मृत्यु... २०७७ मंसिर १३
राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि... २०७७ मंसिर १३
दुईदिने नेपाल भ्रमण पुरा गरि स्वदेश फर्किए विदेश सचिव श्रृंगला... २०७७ मंसिर १२
लडाकुदेखि मन्त्रीसम्मको अनुभव,दृढ इच्छा शक्ति र निरन्तरको संघर्षले नै मानिसलाई सफल बनाउँछ : कमला रोका
२०७७ श्रावण ३१0
संघर्ष र सफलताको अनुकरणीय नाम हो, कमला रोका । समाजमा व्यप्त अन्धविस्वास, विभेदको पीडा सहेर तत्कालिन माओवादीको पहिलो महिला लडाकुदेखि मन्त्रीसम्मको अनुभव बढुलेकी रोका उत्पीडित वर्ग र आम महिलाको प्रेरणाको स्रोत समेत हुन् । उनै रोकासंग जीवनको भोगाई, वर्तमान राजनीतिकोबारेमा अंकुरण खबरका लागि गरिएको कुराकानीको संपादित अंश:
सदैव चुनौती उठाउन सक्ने, चुनौतीमै संभावना देख्ने र संघर्षसंग जुध्ने व्यक्तिले नै सफलता हासिल गरेको हुन्छ । यही भएरत भनिन्छ, जीवन दुख सुख र संघर्षै संघर्षको यात्रा हो । यही यात्राको क्रममा हर भोगाईको अनुभव संगालेकी एक आटिलो र सफल नाम हो कमला रोका ।
विसं २०३२ साल पुस १५ गते रुकुमको प्वाँङमा सामान्य किसान मगर परिवारमा जन्मिएकी कमला रोकालाई अहिलेको अवस्थामा पुग्छु भन्ने न त सोच थियो न त माहोल नै । तर गरे के हुन्न भने जस्तै रोकाको दृढ इच्छा शक्ति, निरन्तरको मिहिनेत, कर्तव्य निष्ठ स्वभावका कारण हाल उनी पूर्वी रुकुमबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सांसद भनेकी छिन् ।
सानैदेखि घर परिवारबाटै निडर स्वभावले संघर्ष गरेकी रोकाको लडाई अहिले पनि जारी छ । अन्याय अत्यचार, विभेदको बिरोध गर्दै समानता मूलक समाजको चाँहा राख्ने रोका आफ्नो विगत यसरी संझिन्छिन् ‘रुकुम दुर्गम जिल्ला हो । त्यसमा पनि म जन्मिएको ठाँउ झनै दुर्गम । विभेद,अन्याय, अत्यचार अहिले त छ भने त्यतीखेर झन नहुने कुरै भएन् । मैलै घर परिवारबाटै लडन सुरु गरे । पढ्न असध्यै मन थियो । तर छोरी पढाउने भन्दा छिट्टै विवाह गरिदिने चलनले मेरो पनि बालबिबाह हुन लागेको थियो । तर गाली, कुटाई, पीटाई अनेकन वाधा व्यावधान सहेर पनि मैलै विद्यायल गएर पढिछाडे ।’
विभेद रहित समाजको लागि शिक्षा र संवृद्ध देशको लागि निश्वार्थ, दुरदर्शी राजनीति अपरिहार्य रहेको बुझेकी रोका विसं २०४६ सालदेखि नै राजनीतिमा लागिन् । तत्कालिन माओवादीले विसं २०५२ साल फगुन १ गते सुरु गरेको युद्धमा कक्षा १० मा पढदै गर्दा रोका पूर्णकालीन रुपमा भूमिगत भइन् । अन्यायको अन्त्य गर्दै न्यायको कल्पनामा ज्यानको कुनै प्रवाह नगरि युद्धमा होमिने उनी पहिलो महिला छापामार पनि हुन् । समाज परिवर्तन र विकासको लागि शिक्षा अपरिहार्य बोध गरेकी रोकाले पढ्ने इच्छालाई शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि निरन्तरता दिइन् । अहिले उनी स्नातक तहको अन्तिम वर्षमा अध्ययन गरिरहेकी छिन् ।
उनी वि.सं २०५३ सालमा पार्टी जिल्ला सदस्य समिति, संगठन इञ्चार्ज, विसं २०५५ सालमा रुकुम पार्टी ब्यूरो क्षेत्र उपप्रमुख, संयोजक, प्यूठान जिल्लाको इञ्चार्ज लगायतका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहिन् । युद्धकै क्रममा उनी वि.सं.२०५४ सालमा नेपालगञ्जबाट गिरफ्तार परेर २ साता हिरासतमा बसिन् ।
वि.सं.२०६१ सालमा केन्द्रीय सदस्य, २०६२ सालमा जनसेनाको बिग्रेड कमाण्डर भइन् । त्यस्तै वि.सं. २०६३ सालमा अन्तरिम विधायक सदस्य, वि.सं.२०६४ मा समानुपातिक सांसद्वि, वि.सं. २०६८ सालमा युवा तथा तथा खेलकुदमन्त्रीको जिम्मेवारी समालिन । त्यस्तै पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य हुदै हाल सांसद् छिन् ।
तत्कालिन माओवादीमा गर्विलो इतिहास बोकेकी रोका युद्धमा होस या हाल जुन सुकै परिस्थितिमा पनि कुशलता पूर्वक आफ्नो काम सम्पन्न गर्ने उदाहरणीय पात्र पनि हुन् । पूर्व आपूर्तिमन्त्री एवं वाइसिएलका पूर्वअध्यक्ष गणेशमान पुनकी श्रीमती रोका दुई छोराकी आमा समेत हुन् ।
जीवनका सबै भन्दा दुख र सुखको अनुभूति यस्तो छ रोकाको :
सानोमा पढ्ने रहर हुँदा पनि नपाउँदा दुख लाग्थो । त्यस पछि मुक्तिका लागि भन्दै धेरै लडाइको अग्रमोर्चामा रहेर लडे । लडाइमा जनताको सुखी भविष्यकै लागि कित मरिन्छ कि मारिन्छ भन्ने सोचलेनै गइन्थो । लडाई सकिएपछि संगै हिडेको साथी गुमाउदा, अंगभंङ हुँदा असध्य पीडा हुन्थो यी क्षण निकै दुखद लाग्थो । तर केही पाउनको लागि केही गुमाउनु पर्छ भन्ने सिकेकाले शोकलाई शक्तिमा बदल्दै अझ शसक्त भइन्थो ।
खुसीको क्षण यसरी सम्झिन्छिन् ‘जीनवमा दुख सुख आउनु सामान्य प्रक्रिया हो हामीले जनयुद्ध गरेकै भोक, रोग, अभाव,शिक्षा स्वास्थ लगाएत आधारभूत आवश्यक्ताबाट कोही पनि वञ्चित नहुँन भनेर हो । कुरीति कुसंकार अन्याय अत्यचार मूक्त समाजको लागि हो । जनताले आफ्नो संविधान आफैले बनाउने व्यवस्थाको लागि हो । त्यही भएर संविधान सभाबाट संविधान बनेको दिन्,पीडामा परेकाले निर्धक आवज उठाउन सकेको देख्दा खुसी लाग्छ । यद्यपी गर्न बाकी धेरै छ ।’
युद्धकालमा होस् या अहिले पार्टीभित्र महिलालाई अलि हेपाहा प्रवृतिले हेर्ने, अबसर नदिने खेल हुन्छ भन्छन्नी हो ?
हो, हाम्रो समाज अझै पनि कतै न कतै पितृसत्तात्मक सोच,व्यावहारबाट ग्रसित छ ।सिद्धान्त र व्यावहामरमा एकरुपता ल्याउन हामी पार्टी भित्र होस या संसद भवन जहासुकै संघर्षरत छौं । हामीले राज्यका होस या पार्टी भित्र जुनसुकै क्षेत्रका रहेक कुरामा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्छ । महिलाका सही निर्णयलाई कही कतैबाट हस्तक्षेप गर्नु हुदैँन भन्ने कुरामा आवज उठाई लडिरहेका छौं । पहिले पहिले मुक्तिका लागि लडिन्थो भने अहिले त्यस भित्र पनि महिला सहभागितको लागि अझ लडदै छौं ।
रुकुम पूर्वबाट निर्वाचित भएर आए पछि त्यहाँका जनताले के परिवर्तन पाए ?
हाम्रो जिल्ला अति विकट जिल्ला हो । गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ लगायतका न्यूनतम आवश्यक्ताबाट पनि बञ्चित छन् धेरै जनताहरु । भौगोलिक रुपले पनि निकै जटील छ । म पहिले सांसद हुँदा पनि जनसरोकारका विषयलाई संबोधन गर्न सधै भूमिका त खेलिरहे नै । त्यस माथि विसं २०७४को संविधान सभामा प्रत्यक्ष जीतेर आएपछि त अझ बढी कर्तव्यबोध भएको छ । जिल्लामा सडक निर्माणदेखि, खानेपानी,शिक्षा,स्वास्थ,विद्यमान अन्धविस्वासलाई हटाउन हरपल लागि परेकै छु । मन्त्री हुँदा होस् या जुनसुकै अवस्थामा रहदा जिल्लाको समस्या समधान गर्न कुनै कसर बाकी राखेको छैन् । त्यो जनताले पनि महसुस गरेका छन् ।
अहिले कोरोनाको समय छ यो अवस्थामा सक्दो राहात लिएर आफै जिल्ला गएकी छु । विभिन्न कामले राजधानीमा बसेकाहरुलाई पनि खाद्यन लगाएत कुरामा सहयोग गरेकी छु । हामी राजनीतिज्ञको काम नै जनतालाई समस्याबाट मुक्त गराउनु हो । यो कुरामा म हरबखत सचेत छु र सोही अनुसार काम गरेकी छु ।
अहिलेको पार्टी विवादलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
नेपालको इतिहासमै जनताले चाहेको शक्ति सम्पन्न बहुमतको कम्यूनिष्ट पार्टी बनेको छ अहिले । सरकारमा पनि नेकपा रहेका कारण हामीले जनयुद्धमा होस या अन्य समयमा भन्ने गरेको संवृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने यो अबसर पनि हो । तर दुखका साथ भन्नु पर्छ यो अवसरको सही सदुपयोग शीर्ष नेतृत्वले गर्न सकेन् ।
पार्टीभित्र मतभेद, वादविवाद हुनु स्वभाविक हो । तर अहिले देखिएको अस्वस्त प्रतिशपर्धा, मनोमानीले पार्टीलाई नोक्सानी त गर्छ नै,नेता र पार्टी प्रति जनविश्वास पनि घट्छ । हामीले पटक-पटक भनेका छौं पार्टीमा देखिएका समस्यालाई समधान गर्दै पार्टी एक ढीक्का भएर अगाडी बढ्नु पर्छ ।
पार्टी एकताको लागि केही सांसदहरुले चलाएको हस्ताक्षर अभियानमा कमला रोकाको पनि सहभागीता छ भन्छन् नी ?
म के कुरा स्पष्ट पार्न चाहान्छु भने हस्ताक्षर अभियानमा मेरो कुनै सहभागिता छैन् । मेरो मत पार्टी फुटाउने कसैलाई छुट छैन् । विद्यमान समस्या समधान गर्दै अझ पार्टी एक ढिका भएर बाकी रहेका कार्यभार पुरा गर्नुपर्छ भन्ने हो । यसको लागि हामी साथीहरु मिलि शीर्ष नेतृत्वलाई सहयोगका साथै आफ्नो ठाँउबाट खबरदारी पनि गरिरहेका छौं । राजनीति विशुद्ध समाजसेवा भएकाले विना स्वार्थ देश र जनताको सर्वो हीतमा लागी काम गरे मात्र जनता समक्ष गरेका बाचा पुरा भई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य पुरा हुनेछ ।
बार्सिलोनाको बायर्न म्युनिखविरुद्ध फराकिलो हार
लिदी पहिरो अपडेड : १६को मृत्यु,२३ जना अझै बेपत्ता,बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहितको टोलीद्धारा घटनास्थलको अवलोकन
समाचार उद्योग वाणिज्य महासंघको मतगणना जारी
Breaking News नेकपा सचिवालय बैठक : ओली र प्रचण्डबीच तिक्तता अझ बढे संभावना
Breaking News जन्ती बोकेको जीप दुर्घटना, चार जनाको मृत्यु
Breaking News राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि
राजनीति दुईदिने नेपाल भ्रमण पुरा गरि स्वदेश फर्किए विदेश सचिव श्रृंगला